Zeorzia: Antsafa Niarahana Tamin’I DvOrsky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2018 2:08 GMT
Tsy vahiny intsony ato amin'ny fizarana lahatsoratra momba an'i Kaokazia ato amin'ny Global Voices i Giga Paitchadze, fantatra kokoa antserasera hoe DvOrsky. Tamin'ny volana Jona taona 2008, niresaka momba ny BarCamp Kaokazia notontosaina tany Tbilisi i Paitchadze, ary niresaka momba ny anjara asan'ny fampitam-baovao vaovao nandritra ny ady tamin'ny volana Aogositra niaraka tamin'i Rosia izy volana vitsivitsy taty aoriana .
Tao anatin'ny andiana antsafa faharoa niarahana tamin'ny bilaogera anatiny na misy ifandraisany amin'i Kaokazia Atsimo dia nanome fanavaozam-baovao ho an'ny Global Voices momba ny fampivelarana ny fampitam-baovao vaovao taorian'ny ady tany Zeorzia i Paitchadze sy ny hetsi-panoherana ny volana Aprily ihany koa .
Indrisy anefa fa tsy tsara ny fifandraisana Skype ka nisy ny ampahany tsy maintsy namboarina noho ny tsy fahatomombanana ka nahatonga izany tsy nisy feo. Na izany aza, azonao henoina na trohana eto ambany ny ankamaroan'ny antsafa. Hitanao ao amin'ny http://www.dgiuri.com [GE] ny bilaogin'i Paitchadze .